Wararka - Shiinaha Yurub Bandhigga Dijital ah ee Ganacsiga Caalamiga ah oo Lagu Qabtay Magaalada Beijing
China Europe International Trade Digital Exhibition, oo ay taageerayeen Shiinaha CCPIT, Rugta Ganacsiga Caalamiga ah ee Shiinaha iyo Ururka Adeegga Shiinaha ee Wadajirka ah oo wadajir ah, ayaa lagu qabtay magaalada Beijing 28-kii Oktoobar ee sanadkan.
Bandhigan ayaa ah mid lagu xusayo illaa sanadkii 45-aad ee xiriirka diblomaasiyadeed ee Shiinaha iyo Yurub, si kor loogu qaado xiriirka u dhexeeya Shiinaha iyo Yurub, si loola kulmo caqabadda ka timaadda COVID-2019 iyo in kor loo qaado cabbiraadaha wax ku oolka ah ee iskaashiga tayada sare leh iyo horumarinta Sino-Europe Dhaqaalaha iyo ganacsiga . Bandhigu wuxuu socday qiyaastii 10 maalmood, ujeeddadiisuna ahayd aasaasidda barxad isgaarsiineed oo loogu talagalay shirkadaha Shiinaha iyo Yurub iyada oo loo marayo "Bandhigga Bandhigga Cloud Cloud Exhibition" oo ka socda CCPIT Adeegga Adeegga Bandhigga Dijital ah, kaas oo ka caawin kara shirkadaha inay helaan fursado iskaashi iyo ballaarinta suuqyada caalamiga ah.
Waqtigan xaadirka ah, dhaqaalaha adduunku wuxuu la dhibaatoonayaa ka-hortagga iyo kor-u-qaadista iyo ilaalinta hal dhinac. Tan iyo sannadkan, oo ay saameyn ku yeelatay COVID-2019, waxay dhacday hoos u dhaca dhaqaalaha adduunka iyo hoos u dhaca weyn ee ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ah. Kaliya ku adkaysiga midnimada iyo iskaashiga, sidaa awgeed waxaan si wada jir ah ula macaamili karnaa caqabadaha halista caalamiga ah isla markaana ku xaqiijin karnaa barwaaqada iyo horumarka guud. Shiinaha CCPIT wuxuu sii wadi doonaa inuu lashaqeeyo dhinac kasta si loo abuuro madal wanaagsan oo loogu talagalay maalgashiga ganacsiga Sino-Europe, si loo helo adeeg wanaagsan iyo sahlanaan badan.
Waxaa jira in ka badan 1,200 shirkado oo ka kala socda 25 gobol sida Gobolka Liaoning, Gobolka Hebei, Gobolka Shanxi iwm. Buug-yaraha wax soo saarku wuxuu ka kooban yahay qalabka caafimaadka, qalabka dhismaha iyo qalabka dhismaha, sahayda xafiiska, alaabta guriga, hadiyadaha, isticmaalka elektaroonigga ah, qalabka guryaha, dharka iyo dharka, cuntada iwm, iyo sidoo kale qaybta adeegga sida warshadaha hal-abuurka leh, adeegga farsamada iwm, gaar ahaan dejinta. 'Aagga Bandhigga Maaddooyinka Ka Hortagga Faafidda'. In ka badan 12,000 oo wax iibsadayaal ah oo ka kala yimid in ka badan 40 dal oo Yurub ah sida Norway, Sweden, Netherlands iwm ayaa ka qayb qaatay, taas oo xaqiiqsatay isgaarsiinta ganacsiga internetka iyo ballaarinta suuqa iskaashiga mustaqbalka iyada oo loo marayo internetka inta ay xafiiska joogaan.
Waqtiga boostada: Oct-30-2020